Somalia waxay maanta markale geedi u tahay god aan ka soo bixid lahayn
MAXAMED YUUSUF MUSE
UMMadda soomaliyeed oo ka rajaynaysay shirka Imbighatii muddo laba sanadood ah in ay ka soo bixi doonto dawladii ay ku nasan lahaayeen kana maydhi lahayd wixii soo maray ee ay xantanayeen mudada ku dhaw afar iyo tobanka sano ah.
Rajadaas ayaa waxa ay noqotay hal bacaad lagu lisay,masuuliyada arinka qaloocdayna waxaa ka masuul ah ragii laga filaayay in ay reerka furaan sabo barwaaqo, ah oon lahayn dulin iyo waxyeelaba ,kuwaas oo reerkii u sahmiyay furayna meel laga sheekayn doono arinkii oo dhana ka dhigay waxba la'aan iyo markale iyo zero,"anba waan yaabayay samkaab ayaa deero dilli".
Hadaba c/laahi oo ku caana ah laguna yaqaan dil aargudasho wanjal burburin xasuuq rag dil assasination iyo waxa la mid ah ma iska dhaafi doona waxaa lagu yaqaan waa maya jawaabtu.
UMmadda soomaliyeedna way taqaan kuu yahay c/laahi iyo halka uu kaga jiro magaciisu umadaba ,tu walba isa saaro c/laahi ayaa la dooran soomali ka degi weyday, c/laahi oo ku caana maalay xumaanta, islaam necaybka, aqoon necaybka, iyo kursi jecaylnimo, iyo dariiqa shaydaanka oo uu raaco ,ayaa soomali m/weyne u noqon caqliga ka degimayso,ka soo bilaw dilalkii uu ka geystay SSDF dhexdeeda ee uu ku laayay sarakiishii SSDF iyo dilalkii danbe ee uu ka dhex geystay puntland intii uu horjoga ka ahaa sida kii Suladaan Hure xasuuqii Qardho.hadaba ninkaa leh taariikhda madaw ma hogaamin doonaa soomali jawaabtu waa maya.
soomaalay runata ha loo sheego kooxda Imbighati ee ka leexatay dariiqii laga filaayay in ay furaan reerka.
shacbiga iyo inta dareenka taagan leh iyo xaq u dirirka iyo inta jecel soomalinimadaba waxaan leeyahay waa in laga hortago ninkan inta aanu soomali isku dilin hurina colaad hor leh waxaanan rajaynyaa in radi ficil muuqda laga bixin doono si dhakhso ah maalmahan soo socda waxaan leeyahay
MACMACAANKA IYO KURSKA WAA LA ISKU MAAGA
MISNA WAXA AY HESHIIYAAN MARKA UU DHIDAR U MUUQDO.